ज्योतिषी भविष्यबाणी- रवि लामिछानेको ठूलो मान्छे बन्ने ग्रह छ
२०७६ भदौ १० मंगलबार, ज्यो सुवेदीले राजनीतिक क्षेत्रलागायतको पक्षमा गरेको भविष्यवाणी पुग्ने गरेका ज्योतिषी हुन् । विभिन्न टेलिभिजनहरुमा भविष्य निर्माण नामको ज्योतिषीय कार्यक्रम चलाउने सुवेदीले कुनै समयमा रवि लामिछानेले सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रम चलाउने न्यूज २४ टेलिभिजनमा पनि भविष्य निर्माण कार्यक्रम चलाएका थिए । ... बाँकी अंश»
बुद्धिमान मानिसहरु एक्लै समय बिताउन रुचाउँछन!
२०७६ भदौ ९ सोमबार, एजेन्सी। तपाई धेरै सामाजिक हुनुहुन्न? धेरै समय आफैसँग बिताउन चाहानु हुन्छ ? यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुस्। तपाई बुद्धिमान हुनहुन्छ । बुद्धिमान मान्छेहरु एक्लै बस्न रुचाउने एक अध्य्यनले देखाएको छ। ... बाँकी अंश»
पतिले झगडा नगरी मायामात्रै गरेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन
२०७६ भदौ ९ सोमबार, काठमाडौं । सामान्यतया पति–पत्नीबीचको झगडा भइरहन्छ । सानोतिनो झगडाले जीवन अगाडि बढ्छ भने ठूलै झगडाले सम्बन्ध विच्छेद निम्त्याउँछ । ... बाँकी अंश»
इमेज च्यानलका पत्रकार दीपक श्रेष्ठ सम्मानित
२०७६ भदौ ८ आइतबार, काठमाडौं । लायन्स क्लव अफ काठमाडौं क्रियटिभ ग्रुपको आयोजनामा इन्टेरनेसनलको इन्डक्सन र इन्स्टलेसन कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ... बाँकी अंश»
यस्तो छ श्रीलंकाको १५ सदस्यीय टोली
२०७६ भदौ ८ आइतबार, उनले टी २० क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिएनन् । टी २० टोलीमा अविष्का फर्नान्डोलाई समेटिएको छ । जसलाई न्युजील्याण्डबिरूद्ध श्रीलंकाको टेस्ट टीममा मौका दिइएको थिएन । अविष्काले विश्वकपको चार खेलमा २३० रन बनाएका थिए । ... बाँकी अंश»
आर्मी बनेर काश्मिरमा खटिएका धोनी फर्किएसँगै बनाइए नेता
२०७६ भदौ ८ आइतबार, काठमाडौं । महेन्द्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटमा चलेको नाम हो । पछिल्लो समय भारतीय सेनामा भर्ती भएपछि धोनीले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । चाहे शिविरमा सामान्य कपाल काटेर होस् वा अर्मीको ड्रेसमा जुत्ता पोलिस गरेर , धोनीले यी क्रियाकलापबाट समर्थकहरुको मन जति रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
अर्वपति अम्बानीका छोरा छोरी आफै गर्थे कोठा सफा
२०७६ भदौ ५ बिहिबार, काठमाडौं । भनिन्छ हरेक सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ । यो भनाइ मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानीमाथि लागु हुन्छ । आज मुकेश अम्बानी भारतका सबैभन्दा धनी उद्योगपति हुनमा त्यसको श्रेय नीता अम्बानीलाई जान्छ । मुकेश र नीता अम्बानीको लभ स्टोरी निकै रोचक छ । आफ्नो लभ स्टोरीको खुलासा मुकेश र नीताले एक अन्तर्वार्तामा गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
दैनिक खानामा ४ लड्डु मात्र पाउन थालेपछि श्रीमानले मागे पारपाचुके
२०७६ भदौ ५ बिहिबार, एजेन्सी। तपाईलाई खानामा बिहान- बेलकै मिठाइ मात्र दिने हो भने कस्तो हुन्छ होला ? मिठाईका पारकीलाई केहि समय त रमाइलै लाग्ला तर यो क्रम लामो समय चलेमा अत्यास लाग्ने निश्चित छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ भदौ ४ बुधबार, सलमानका भाइ सोहेल खानको कम्पनिले उक्त शोहरु आयोजना गरेको हो । कम्पनीले मिकालाई अनुबन्धित नगरेको तर अमेरिका स्थित स्थानीय कम्पनीले अनुबन्धित गरेको भए आफुलाई थाहा नभएको जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
अनौठा विवाह संस्कार : १२० भोल्टको विजुलीको झड्का सहन सकेमात्रै त्यो मर्द
२०७६ श्रावण ३२ शनिबार, काठमाडौ । अमेरिकामा पुरुषलाई मर्द हुनको लागि साह्रै गाह्रो हुने गर्दछ । दक्षिण अमेरिकाको एक जनजातीय परम्पराका अनुसार कुनैपनि केटीले मर्द केटासँग विवाह गर्नको ... बाँकी अंश»
२०७६ श्रावण ३२ शनिबार, काठमाडौं । हाम्रो दैनिक जीवनमा हजारौं व्यवहारहरुको सामना हामीले गर्नुपर्छ । सामाजिक प्राणी भएपछि हामीले धेरै व्यवहारहरु मानिससँग नै गर्ने गर्दछौ। ... बाँकी अंश»
४०० वर्ष पुरानो बौद्ध मन्दिरमा पुजारी बन्यो रोबट, जीवन दर्शनबारे दिन्छ शिक्षा
२०७६ श्रावण ३१ शुक्रबार, काठमाडौं । जापानको एक ४०० वर्ष पुरानो बौद्ध मन्दिरमा मूल पुजारीको रुपमा रोबटलाई नियुक्त गरिएको छ । बौद्ध मन्दिरमा रोबटको नियुक्तिको विषयमा केही विवाद ... बाँकी अंश»
चट्याङबाट एकै परिवारका तीन मारिए
२०७६ श्रावण २७ सोमबार, भियतनाम । भियतनामको उत्तरी भागमा पर्ने येन बाइ प्रान्तका सोमबार परेको चट्याङको कारण एकै परिवारको तीन सदस्य मारिएका छन् । मारिएका ती व्यक्तिहरुका ५७ बर्षीया एक महिला, उनकी २५ वर्षीया बुहारी र चार महिनाको नाति रहेका छन् । ... बाँकी अंश»
विवाह गर्न नपाएपछि चिनियाँ युवायुवती दुखी
२०७६ श्रावण २४ शुक्रबार, “विवाह जीवनको एक आवश्यक हिस्सा अब रहेन,” साउथवेस्ट जियाटोङ युनिभर्सिटीका मनोसामाजिक अध्येता प्राध्यापक गाओ फेईले बताए । “विवाह गर्ने वा नगर्ने यो निजी रुचिको कुरा हो, र हरेक व्यक्तिले आफूलाई खुशी तुल्याउने किसिमको निजी जीवनशैली अनुशरण गर्न सक्छन् ।” ... बाँकी अंश»
जसले आफुलाई मार्ने योजना थाहा पाएपछि सेनाको व्यारेक फोडेर भागे
२०७६ श्रावण २१ मंगलबार, काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दकालमा सेनाको व्यारेक फोडेर भागेका राजु क्षेत्री अहिले सामन्य रुपमा जीवन विताईरहेका छन् । तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट लडाई लडिरहेका क्षेत्रि कास्कीको आफ्नै ठूलोबाबाको घरबाट २०५८ सालमा नेपाली सेनाबाट पक्राउ परेका उनलाई विजयपुर व्यारेक हुँदै धादिङ लगियो । ... बाँकी अंश»
२०७६ श्रावण १९ आइतबार, काठमाडौं । बेलायतको एक अदालतले एक व्यक्तिलाई ५० मिनेटको जेल सजाय सुनाएको छ । यो सम्भवतः विश्वको सबैभन्दा कम समयको जेल सजाय हो । अदालतले सोमरसेट बस्ने २३ वर्षीय शेन जेनकिंसलाई उक्त सजाय सुनाएको हो । यतिमात्र होइन । जति समय उनी जेलमा बसे त्यतिबेला उनी क्षमायाचनाको पत्र लेखिरहेका थिए । यो पनि सजायको एक हिस्सा थियो । ... बाँकी अंश»
एक घण्टाका लागिमात्र जन्मिएको दुई टाउको भएको शिशु
२०७६ श्रावण १६ बिहिबार, धनुषा । जनकपुरको रामानन्द चोकस्थित मिहिलाल इन्टरनेशनल अस्पतालमा बिहीबार दुई टाउको, चार आँखा र चार कान भएको अनौठो शिशुको जन्म भएको छ । ... बाँकी अंश»
भण्डाराबाट निक्लियो ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आधा रातसम्म गनियो पैसा
२०७६ श्रावण १६ बिहिबार, काठमाडौं । भारतको चर्चित कृष्णधाम सांवलियाजीको हलियाली औंशीको मेला चतुर्दशीमा भण्डार खुलेसँगै शुरु भएको छ । प्रभु श्री सांवरियाको सेठबाट भण्डार गणनाको रकम करीब ५ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँबराबर पाइएको थियो । ... बाँकी अंश»
धोती-कुर्तामा जब बटुकहरुले हाने चौका-छक्का, संस्कृतमा भयो कमेन्ट्री
२०७६ श्रावण १५ बुधबार, वाराणसी। त्यो खेल अरु सामान्य मानिसको खेल भन्दा फरक थियो । आम युवाहरु र उनीहरुको खेलको क्रममा लगाउने पोषाकको रंग ... बाँकी अंश»
निःशुल्क जापानी मेकअप
२०७६ श्रावण १५ बुधबार, चिप्लेढुङगा । पोखरा महानगरपालिका सेवाग्राहीको चाप हुने महानगर हो । मङ्गलबार सेवा लिन महानगर पुगेका सेवाग्राही भने केही अचम्ममा परे । महानगरको मूल ढोकामा एक जापानी महिला मेकअपका सामानसहित चिटिक्क परेर बसेकी थिइन् । उनका वरिपरि अन्य सौन्दर्यकलाका विद्यार्थीहरु पनि थिए । बोर्डमा लेखिएको थियो ‘जापानको निःशुल्क मेकअप ।’ ... बाँकी अंश»